A na-ere nkeji 250.000 nke Xiaomi Redmi Rịba 4s na India na nkeji 10 | Gam akporosis
Nyaahụ anyị mụtara na Hugo Barra ahapụla ọnọdụ ya na Xiaomi ịlaghachi obodo ya mgbe afọ atọ rụsịrị n'ụlọ ọrụ a nke ọ nwere ike ịbanye na ya gbanwee site na mmalite ka ihe ka ibu. A Xiaomi ejirila ahụmahụ nke exGoogler nọrọ n'oche na mba ndị dị nso na China, dịka India.
Site na ahụmịhe Xiaomi na ahịa ọkụ, ọ nwebeghị ike ire karịa Nkeji 10 nkeji 250.000 nke Redmi Rịba ama 4 na nke mbụ ya ire dị na India. Ngwaọrụ dị ụnyaahụ site na Flipkart na mi.com, ọ gaghị adị ruo izu na-abịa.
Redmi Rịba ama 4 nwere ihe niile iji soro oge nke ịga nke ọma nke onye bu ya ụzọ, Redmi Rịba ama 3, ekwentị zụrụ kacha na ntanetị na mba a nwere ihe karịrị 2,3 nde ahịa n'ihe dị ka ọnwa isii n'afọ gara aga.
Ihe Xiaomi Redmi Rịba ama 4 na-amalite na $ 147 maka ụdị 2GB RAM + 32 GB nke ebe nchekwa dị n’ime, ebe maka 4GB RAM na 3 GB nke nchekwa dị n’ime anyị nọ na dollar 32. Dị dị elu nke Redmi Rịba ama 162 na-efu $ 4 na 190GB nke RAM na 4GB nke ebe nchekwa dị n'ime.
Ọnụ ya na 5,5 anụ ọhịa IPS Full HD ihuenyo, MediaTek Helio X20 octa-core 1,85 GHz chip, 13MP igwefoto azụ, 5 MP n'ihu na Android 6.0.1 Marshamallow nke na-enyekwa ohere nke ịgbasa ebe nchekwa dị n'ime site na microSD. Batrị ahụ bụ 4.000 mAh ma nwee ngwa ngwa, Bluetooth 4.2, USB OTG na ihe mgbaàmà mkpịsị aka ngwa ngwa.
A Xiaomi Redmi Rịba ama 4 nke na-enwe a nnukwu ihe ịga nke ọma na India dị ka nke a na-ere site na ire ere ahụ nke nkeji 250.000 furu efu naanị na 10 nkeji.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Xiaomi » Xiaomi na-ere 250.000 Redmi Rịba 4 na nkeji 10 na mbido ọkụ mbụ na India
Samsung na-agbakọta ibe Snapdragon 835 na-amanye asọmpi ahụ iji ndị okenye na-arụ ọrụ